XOG:- Jeneraal Afgaduud oo xil cusub looga magacaabay dowladda federaalka Soomaaliya – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Jeneraal Afgaduud oo xil cusub looga magacaabay dowladda federaalka Soomaaliya
Ilo xog-ogaal ah oo aynu ka heleyno xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in taliyihii hore ee ciidamada booliska maamulka Puntland Jeneraal C/risaaq Maxamuud Yuusuf Af-gaduud xil cusub looga magacaabay dowladda federaalka Soomaaliya.
Jeneraal C/risaaq Afgaduud ayaa la sheegayaa in loo magacaabay taliyaha isku dhafka ciidanka booliska iyo xiriirka maamul goboleedyada dalka ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Xilkaan loo magacaabay Jeneraal C/risaaq Af-gaduud ayaa la sheegayaa inuu yahay mid ku cusub taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed, islamarkaana aanu ahayn mid hore u jiray.
Jeneraal C/risaaq Afgaduud oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada booliska maamulka Puntland ayaa xilkaasi laga qaaday, kadib markii uu gacan ka hadal dhex maray isaga iyo taliyihii ciidamada birmadka ee maamulkaasi Jeneraal Cismaan Xasan Cuuke Afdalow.
Gacan ka hadalkaasi ayaa la sheegayaa in ugu dambeyn uu sababay inay isku dhacaan labada ciidan oo ay labadaasi taliye kala hoggaaminayeen.
Wasiirka amniga maamulka Puntland Cabdi Cali Xirsi Qarjab oo xilligaasi isku dayay inuu kala dhexgalo labadaasi ciidan ayaa dhaawac culus kasoo gaaray, waxaana xilligaasi dhaawaciisa la geeyay isbitaalka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.